नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गमा निर्माण प्रस्ताव छनोट हुँदै – Radio RajMarga 92.1 MHz
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गमा निर्माण प्रस्ताव छनोट हुँदै
चैत्र ५ । देशकै पहिलो सडक यातायात सुरुङमार्ग नागढुंगा–सिस्नेखोला निर्माणका लागि पेश भएका प्रस्तावहरू ४ महीनाभन्दा बढी समयसम्म थन्केपछि छनोट प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । गत दशैंताका पेश गरिएका प्रस्तावहरू निर्धा्रित समयावधि कटि सक्दा पनि स्वीकृत नभई अड्किरहेका थिए । तर, अब प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भई फाइल सडक विभागलाई पठाइएको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरी वैशाख अन्तिम वा जेठ पहिलो सातादेखि सुरुङ निर्माण शुरू हुने उहाँले बताए । सुरुङमार्गका लागि जाइकाले रू. १६ अर्ब ऋण सहयोग गर्नेछ भने रू. ६ अर्ब सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्नेछ । सुरुङमार्ग बनाउन पाँच चिनियाँ र एक जापानी कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सुरुङमार्ग बलम्बुबाट शुरू भएर सिस्नेखोलाभन्दा ५०० मिटर पर पुगेर टुंगिनेछ । यसबाट हालको सोही भागको दूरी २ दशमलव १ किमी कम हुनेछ । प्रवेशमार्ग अन्तर्गत दुईओटा फ्लाइओभर बन्नेछन् । एउटा फ्लाइओभर बलम्बुमा रहनेछ भने अर्को फ्लाइओभर सुरुङमार्गको मुखनेर नागढुंगामा बन्नेछ ।
चैत्र ५, २०७५ प्रकाशित